बैंक/वित्त Archives - Page2of 137 - Lokpath Lokpath
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:३३
सिटिजन्स बैंकको नयाँ ४ शाखा उद्घाटन
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले आफ्नो वित्तीय पहुँच विस्तारको क्रममा विभिन्न ४ नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । यसैक्रममा बैंकले कास्कीको हस्पिटल चोक, कैलालीको अत्तरिया तथा सुखड शाखा, मोरङ कन्चनबारीको
डोटी । महिलाले नेतृत्व गरेका महिला सहकारी संस्थाका कारण डोटीका महिला स्वरोजगार बन्दै गएका छन् । जिल्लामा खुलेका सहकारी संस्था पछिल्लो समय महिलाका लागि आम्दानीका स्रोत बन्दै गएका छन् ।
सेन्चुरी बैंकको स्वतन्त्र संचालकमा गीता प्रधान नियुक्त
काठमाडौं। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले स्वतन्त्र संचालकमा प्रा. डा. गीता प्रधानलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको संचालक समिति बैठकले प्रधानलाई स्वतन्त्र संचालकको रुपमा नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । आफ्नो
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग
काठमाडौं। एनआईसी एशिया बैंकले ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले उपत्यका बाहिर तथा उपत्यकाको लागि १५० जना ट्रेनी असिस्टेन्ट माग गरेको हो । साे पदका लागि बिजनेस, फाइनान्स,
‘स्पोर्टअवार्ड २०७५’ मा ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा नगद पुरस्कार वितरण
काठमाडौ. । नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडी संघद्धारा आयोजित ‘स्पोर्ट अवार्ड २०७५’ मा उकृष्ट खेलाडीहरुलाई प्रदान गर्ने नगद पुरस्कार ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रायोजन गरेको छ। बैंकले पुरुषतर्फ उत्कृष्ट भएका प्याराग्लाईडिङ्गका
गभर्नर नेपाल १ महिना बिदा नबस्ने, यस्तो छ उनको कार्ययोजना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल बिदा नबस्ने भएका छन् । गभर्नर नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदै छ । कार्यकाल सकिनु् अघि गभर्नरहरु बिदामा बस्ने
वाणिज्य बैंकका शाखा आठ स्थानीय तहमा मात्रै खुल्न बाँकी
काठमाडौं । सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पु-याउने सरकारको लक्ष्य करिब–करिब पूरा हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको गत पुस मसान्तसम्मको विवरणमा अब आठ
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सहकारी संस्थाहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले अत्यन्त जोखिममा रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण’ सम्बन्धी कार्यक्रममा महानिर्देशक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार दुई अर्ब बराबरको टे«जरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार बोलकबोल प्रक्रियाका माध्यमबाट उक्त परिमाणको टे«जरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो